Amabango Omenzekalo Wobuqu | DSC Attorneys
DSC Attorneys > Xhosa > Amabango Omenzekalo Wobuqu
Ukuba uye wenzakala ngenxa yokungakhathali komntu othile, unganalo ibango lomenzakalo wobuqu. Oku kuthetha ukuba ungafaka ibango lokubuyekezwa nguloo mntu okanye loo nkampani enoxanduva laloo menzakalo onawo.
Kwibango lomenzakalo wobuqu, unganikwa imali yokuhlawulela:
iindleko zasezibhedlele nezamayeza osele uzibhatele noseza kuzibhatala ngenxa yomenzakalo onawo
imali yomrholo osele noseza kuphulukana nayo ngenxa yomenzakalo
umonakalo jikelele weengqaqambo nokubandezeleka.
Kwakhona unganebango lomenzakalo wobuqu ukuba umntu onondlayo kusapho lwakho uye wasweleka ngenxa yokungakhathali komnye umntu.
Ukuba unebango lomenzakalo wobuqu, singakumela ngokwezomthetho ngoko nangoko – kwaye sisebenza ngento ethi “no win, no pay” (xa singaphumelelanga, awuhlawuli).
E- DSC Attorneys, sikholelwa ngokumandla kwilungelo labo bonke abeloMzantsi Afrika lokuba bamelwe ngokusemthethwenin ngendlela ephumelelayo.
Ungalifaka xa kutheni ibango lomenzakalo wobuqu?
Ungalifaka ibango lomenzakalo wobuqu ukuba uye wenzakala ngenxa:
yengozi yendlela engabangelwanga nguwe
ingozi ye-Metrorail/ kaloliwe, enoba loo menzakalo wenzeke kuloliwe, xa ubukhwela okanye ubusehla kuloliwe okanye esitishini
ubugwenxa kwezamayeza (ukungakhathali kukagqirha okanye abanye abasebenzi kwezempilo)
ukutyibilika okanye ukuwa, ngenxa yokungakhathali komnye umntu – ngokomzekelo ezivenkileni
imveliso enesiphene okanye eyingozi, okwaziyo kuyo ukufaka ibango letyala ngaloo mveliso
I-lift engasebenzi kakuhle, izinyuko (escalator), igeyithi okanye icango elihamba ngombane
Ukutyiwa yinja – ungaselungelweni lokufumana imbuyekezo kumnini wesilwanyana eso
Ukubethwa ngamapolisa okanye ukubanjwa okanye ukuvalelwa ngokuphosakeleyo.
Kutheni umele uqhagamshelane nathi apha eDSC Attorneys?
Ayikho into eyodlula ukuba noncedo lwengcali yezomthetho emva kokuba uye wenzakala okanye umntu onondlayo kusapho lwakho eye wasweleka ngenxa yokungakhathali komnye umntu.
Xa kusehla ishwangusha, ungabalekela kwiDSC Attorneys ufumane ukumelwa ngamachule kwezomthetho, anenkathalo nanovelwano
Sazise nje ngeenkcukacha zengozi nomenzakalo onawo, kwaye ingcaphephe yegqwetha lomenzakalo wobuqu liza kuhlolisisa ibango lakho lize lijonge nokuba mangakanani amathuba okuba liphumelele. Bonke abantu esibancedayo sibanika uthethathethwano lokuqala simahla.
Ukuba unebango lomenzakalo wobuqu, singakumela ngokwezomthetho ngoko nangoko – kwaye sisebenza ngento ethi “no win, no pay” (xa singaphumelelanga, awuhlawuli). Oko kuthetha ukuba akuzi kufuneka ukhathazeke ngeentlawulo zezomthetho ngaphandle kokuba ibango lakho liyaphumelela.
I-DSC Attorneys itshotsh’ entla kwicandelo lomthetho womenzakalo wobuqu. Imeko nganye siyiphatha ngentlonelo nesidima esiyifaneleyo, sidibanisa ubugcisa bethu bezomthetho namava okunika abantu esibancedayo iziphumo ezisemagqabini.
Kubantu Esibancedayo AbangamaXhosa
Sikwakholelwa nakwelokuba kubalulekile ukuba abantu bathethe ngolwimi lwabo lwenkobe. Loo nto isinceda siqonde zonke iinkcukacha zebango ukuze sikwazi ukubanika ezona ziphumo zisemagqabini kwezomthetho.
Uninzi kubantu esibancedayo luthetha isiXhosa njengolwimi lokuqala. Ngenxa yoko, sinentaphane yeetoloki zesiXhosa eziphum’ izandla eziphangela ngokusisigxina apha.
Sikhangele phambili ekubonaneni nawe size sikuncede ufumane imbuyekezo ekufaneleyo.